Soo ogow waxa ka muuqda Saxaraha Saxaraha | Wararka Safarka
El Saxaraha Saxaraha waa lamadegaanka ugu kulul adduunka oo leh in kabadan sagaal kun oo kilomitir oo laba jibbaaran. Waxaa laga helaa Waqooyiga Afrika laga bilaabo Badda Cas illaa Badweynta Atlantikada iyadoo leh meelo sidoo kale ka gudba Badda Dhexe. Waxay sidoo kale ka kooban tahay dhul ballaaran oo dhowr dal ah sida Marooko, Muritaaniya, Niger, Suudaan ama Tuniisiya. Booqashada lamadegaanka Saxaraha waa mid aan la iloobi karin, sidaa darteed waa safar riyo ah oo dad badani u socdaan.
Aan aragno waxa aan awoodno ku raaxayso saxaraha lama degaanka ah ee Sahara, Banaan diiran oo bixiya ecoregions kala duwan iyo meelo kala duwan oo laga baadho. Waxaan ku soo booqan doonnaa muuqaal qurxoon oo leh dunes, ergs, dooxooyin qalalan ama guryo milix leh. Aan aragno xoogaa fikrado ah oo ku saabsan waxa laga arki karo Saxaraha.
1 Merzouga iyo dunnida Erg Chebbi
3 Ku seexo lamadegaanka
4 Wadada Kumanka Kasbah
5 Meelaha u dhaw
Merzouga iyo dunnida Erg Chebbi
Ereyga Erg wuxuu qeexayaa nooc ka mid ah lamadegaanka oo ay abuureen carro tiro badan iyo Chebbi waa magaceeda, inkasta oo badanaa loo yaqaan 'Merzouga' maxaa yeelay tani waa magaalada u dhow ee aad ka bilaabanayso inaad tagto dunta. Tani waa mid ka mid ah dalxiisyada ugu badan ee loo maro Saxaraha Saxaraha ee ka yimaada Morocco. Aaggan wuxuu leeyahay dherer qiyaastii soddon kilomitir ah iyo qaar ka mid ah godadkiisa dhererkoodu wuxuu gaari karaa 150 mitir Si aad u timaaddo aaggan waxaad ku tagi kartaa safarro hagitaan ah ama gaadiidka dadweynaha ee ka yimaada Fez ama Marrakech safarka soconaya illaa siddeed ama toban saacadood. Markaan tagno Merzouga waxaan awoodi doonaa inaan sameyno waxyaabo kala duwan inkasta oo waxa caadiga ah ay tahay inaan qaadano waqti aan ku aragno sida ugu yar ee aan ugu jirno muuqaal qurxoon iyo inaan ku raaxeysanno khibradaas. Intaas waxaa sii dheer, nashaadaadyo kala duwan ayaa lagu bixiyaa meeshan sida isticmaalka afar geesoodka ama 4 × 4s si looga gudbo dunes, ku dhejinta sabuurada, taas oo ah wax aad u xiiso badan ama sameynta raacitaanno isdaba joog ah sida Berber dhab ah uu sameyn lahaa. Aaggan waxaad sidoo kale ku arki kartaa xayawaanka qaar sida cayayaanka ama dawacada. Waqtiyada ugu wanaagsan waa aroor iyo galab, maadaama nalka iyo muuqaalka dhulku is beddeleen gebi ahaanba.
Baddani ciidda ah ayaa ka ballaadhan ballaadhkeed laakiin ka hooseeya marka loo eego dunnideeda, sidaa darteed waa ka caann yar tahay laakiin waxay shaki la’aan noqotay beddel kale marka la booqanayo Saxaraha Saxaraha. Si loo gaaro aaggan waxaa lagama maarmaan ah in la qaato safar labo ama saddex saacadood ah iyada oo loo marayo muuqaallo kala duwan. Hareeraha aaggan lamadegaanka ah waxaan ka heli doonnaa qodobo xiiso leh sida Harada Iriki oo runtii ah meel dhoobo laga soo saaray taas oo qallalanayd illaa labaatan sano. Magaalada M'Hamid waa tan ugu dhow, oo ah meel horay u ahaan jirtay gawaarida safarka.
Ku seexo lamadegaanka
Mid ka mid ah waayo-aragnimooyinka ugu muhiimsan ee lagu samayn karo Saxaraha Saxaraha waa si hufan loogu dhex hoydo, oo lagu seexdo xiddigaha hoostooda. Caadi ahaan dalxiisayaashu badanaa waxay seexdaan teendhooyin ku yaal aagagga kala duwan ee lamadegaanka maxaa yeelay waa wax caan noqday wayna fududahay in la kiraysto adeeggan iyada oo lala kaashanayo dalxiisyada lamadegaanka. Jaima waa qaab dhismeed fudud oo laga samayn karo birta ama qoryaha oo badanaa lagu daboolo dhar. Caadi ahaan kaamamkani waa weyn yihiin dhexdoodana waxaan ku yeelan doonnaa dhismeyaal kala duwan oo aan ku seexanno, waxay na siiyaan adeegyo kala duwan iyo aag dhexe oo aan ku soo ururin karno kuna raaxeysan karno xiddigaha cidlada ku nool.
Wadada Kumanka Kasbah
Una kashah waa eray tilmaamaya qeyb dhexe oo magaalada ah ama qalcad. Waxaa jira noocyo kaladuwan oo kasbah ah, sida kuwa woqooyiga, oo kuxiran dhaqanka carabta, kuwaas oo ahaa dhismayaal la xoojiyay oo hoy u ahaa gudoomiyayaal, iyo kuwa koonfurta kuxiran oo laxiriira dhaqanka Berber, kuwaas oo ah halkii lagu kulmi lahaa jidadka ganacsiga. Waxaa jira dhowr waddo oo soo booqda dhowr ka mid ah kasbah-yadaas kuwaas oo qayb ka ah dhaqanka aaggan ka tirsan Saxaraha. Waxaad ka bilaabi kartaa meelaha sida Ouarzazate oo aan ku arki karno Kasbah Taourirt, mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo dalka oo dhan. Waxaan ku arki karnaa kuwa kale jidadka aan kireysano, sida Kasbah Teoulet ee Dooxada Ounila ama Amridil kasbah oo ku taal Skoura Palm Grove.
Meel u dhow Saxaraha Saxaraha ayaan ka heli karnaa meelo kala duwan oo la booqdo sida Ourzazate, magaalo qurxoon oo ku taal Marooko. Magaaladaan waxaan ku arki karnaa Kasbah ee Taourirt, oo ah meel habeysa ballamaha ganacsiga. Magaaladaan sidoo kale waxaan ku arki karnaa Fagaaraha Al Mouahidine halkaas oo ay ku yaalliin makhaayado iyo dukaamo. Albaabada lamadegaanka Erg Chegaga waxaa ku yaal Tamegroute, oo ah xarun diimeed laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad halkaas oo aan ku booqan karno xarun dhoobada dhaqameed leh xarun wax lagu karsado. Sidoo kale xiisaha ayaa ah Zaoui Nasiriyya, oo ah xarun muslimiin ah oo leh diimo kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Saxaraha Saxaraha
Jasiiradaha ugu quruxda badan Boortaqiiska